Sob of the ojii - Alain mabanckou - AFRIKHEPRI
Obere nke nwa nwoke - Alain mabanckou
Alain Mabanckou eme budata na nkwalite na nọchiri ihu Francophone akwụkwọ site ya na ozizi ya na-eme United States, novelist, na-ede uri, na-ede edemede, na edemede enye Ndụmọdụ maka akụkọ ifo mbipụta Ebe ndi Afrika na Paris. Nso nso ọdịda site na French Academy na akwa na-agbata n'ọsọ nke Henri Gal akwụkwọ na-agbata n'ọsọ nke Institute of France, maka niile nke ọrụ ya, Alain Mabanckou yiri karịa mgbe ọ bụla a ma ama. Karịsịa ebe ọ bụ ule ikpeazụ ya Nwanya nke nwa nwoke ahụ ekwu okwu banyere ọtụtụ esemokwu.
Ma, ka anyị banye n'obi nke okwu ahụ! N'okpuru utu aha onye ọkà ihe ọmụma bụ Pascal Bruckner gbazirima jiri nwayọọ nwayọọ gbaghaa, edemede ọhụrụ a na-eme ka àgwà ndị na-akpali ndị Africa ụfọdụ kọwaara ọdachi nke mpaghara ojii ahụ site na prism nke nzukọ na Europe ma na-eti mkpu banyere ọdịnihu ha. Site ná mmalite, akwụkwọ ozi ahụ degaara nwa ya nwoke ọkwa ọkwa: Nwa m hụrụ n'anya, nke kacha njọ bụ nke na-abịa site na ndị dị ka gị, ndị nwere ụdị akpụkpọ ahụ dị ka gị. Ihe omimi bu ihe omuma nke mbu n'etiti ndi mmadu dika otua, tutu igbasa "agburu" ndi ozo site na ngbaputa nke ngbaputa (p.16) .Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a nwere ike ime ka mmadụ chee ozugbo banyere leta James Baldwin nwa nwanne ya na edemede edemede ya Oge ọzọ, ọkụ. E nwere ike ikwu okwu ikpeazụ nke leta a n'okwu a: "M zitere gị ihe a dị ka mgbịrịgba ịdọ aka ná ntị ka ị ghara ịdaba n'ọnyà a. A mụrụ gị ebe a, ọdịnihu gị nọ ebe a, ị gaghị echefu ya. Jụọ onwe gị ihe ị na-eweta n'ala nna a n'echeghị ụgwọ ọrụ ọ bụla. "(20)
N'ezie, dịpụrụ adịpụ site na Europe na Africa, Alain Mabanckou na-atụ aro ịmepụta ụdị adị adị adị na-achọ ịjụ ajụjụ ndị dị ugbu a, iji gbalịa idozi ha na ịjụ ụfọdụ nkọcha "dermal". ma ọ bụ "ederede", iji kwupụta onye edemede. Ihe dị mkpa bụ ijide n'aka na ugbu a nwa ya nwere ike ịnweta. Ka ọ ghara ịbụ ẹkenịmde njigide na a akụkọ ọ na-mara, na ọ dịghị mgbe bi, ma ọ anya na ya ugbu a nwere ike ime ka ọdịnihu ya a obere ihe na-akpali. Na nkenke, mee uche gị ihe na-aga ime. Agbasi na n'ụzọ dị irè Mabanckou eweghachi a ọhụrụ version of Negritude yiri ka "mata" ndị isi ojii, na-egosi na ha na-ajụ zoo n'azụ mmetụta nke a anya gara aga na-ewu a ndụ ọhụrụ.
Ajụjụ nke ọkụ
Alain Mabanckou na-ekwu banyere Africa dịgasị iche na nkewa. Ndị Afrika nọ na France kwesịrị ịma ibe ha ma ghara ịkpọ onwe ha "ụmụnna" aha agba akpụkpọ ahụ ma bụrụ otu obodo ahụ ma ọ bụ ụkọ ojii. Kedu ihe dị n'etiti Senegalese, Antillean, Malian na Black nke a mụrụ na France? Ọ nweghị ihe ọ bụrụ na ọ bụ akpụkpọ ahụ. N'okpuru "Ihe ọ bụla", onye edemede ahụ maara nke ọma ịdị arọ nke akụkọ ihe mere eme na njirimara nke ojii gburugburu ụwa, ọ maara nsogbu ndị nwere ike ịbịara ọtụtụ n'ime ha n'ihi agba akpụkpọ ahụ ha, ọ maara na amaghị okwu okwu ndị ahụ na ọnụnọ ha na-akpali na mba dịka France.
Ka mma, na mmụọ nke Mabanckou: "Negroes amaghị onye ọ bụla, akụkọ ha dabeere n'ememe nke mba ụwa dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa, ndị ahụ bụ ndị a kwadoro ịgba ohu ma ọ bụ ịchịisi. Na France, Senegal, ndị Reunionese na Congolese bụ ndị mba ọzọ maka ibe ha, ọ bụghị ikwu otu asụsụ sitere n'Africa ma French. "(47)
Ma Afrika ọ bụla rutere France maka ebumnobi ya. Ha abughi ebe a site n'inye ohu, dika ndi America America, ndi biara na ahia ohu ohu n'America, mepee ihe nkesa ihe omuma ma buru ndi otu akuko.
Mabanckou ghọtara na enwere ike ịda mbà na obodo ndị a na-akpọ black ojii na France, a na-akpọ malaise na ndị ojii bi na France enweghị akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị otu nkwupụta ahụ. Ihe a nile enweghi ike ime obodo. "Anyị nọ n'ọnọdụ ebe Blaks nke France bi n'ụdị ọhịa, ebe onye ọ bụla na-agbasi mbọ ike ibi ndụ ya. Enweghị ihe ndị na-akpatakarị ma enweghi ọchịchọ ọ bụla, "ka ọ na-ekwu.
A ga-anwale onye na-agụ ya ịgụ edemede a dị ka ngosipụta nke njirimara. The dị iche iche onwe ha nke edemede a isi ike na-agụ ke ọ bụla iji, kwughachiri ọtụtụ zoro dere: Bernard Dadi Montesquieu, Amin Maalouf Ferdinand Oyono Philippe Labro, Yambo Ouologuem, Jean-Marie Adiaffi, Julien Gracq, Michel Leiris na Ahmadou Kourouma ma ọ bụrụ na ọ bụ site na isiokwu nke isi.
Alain Mabanckou maara njirimara nke a nwoke chọrọ abughi ka n'ala nna ya ma ọ bụ ọbara ya ma bụ a nhọrọ onwe onye, ​​erikwa onye ịma aka bụ iji mee ka anyị dị iche iche "otu" nke nwere ike ghaghị iru a aka nke a na - ejikarị (p.50). Mgbe confluence nke atọ omenala - French, Congo, American - njirimara mabanckienne-azụ nzukọ, gụnyere otu na "Franco-Norman" lụtara isiokwu bụ "ogbu identities". Na-esi ọnwụ na-French, ọ bụghị a mụọ French, Mabanckou-emesi echiche nke ụmụ amaala ka megide mba, na-họọrọ dị ka akọnuche ya nke ya: N'etiti mụ na Norman a guzoro mgbidi. Anyị nwere ụdị French abụọ. Ọ na-kegide a definition na echesinụ echiche nke mba, na-enwetara n'ihi na anyị na-ndammana mụrụ na France nke French nne na nna, ndammana ọcha, na m na French amaala họọrọ na ezi akọ na uche metụtara njikere nke onye nchoputa (P. 56). Ma nke abụọ, a na-atụle mba ha mgbe niile, na mgbe ụfọdụ, iwu na-etinye ha n'ọnọdụ nke enweghị ntụpọ. Ọbụna mgbe, na akwụkwọ, ha bụ n'ezie French, ụfọdụ anya, mgbe niile, na-ajụ mmalite ha. p. 94.
Ihe dị mkpa ịkọwa ebe a bụ na maka Mabanckou, ọ bụ ndị ọzọ na-amanye anyị ịjụ onwe anyị ajụjụ banyere njirimara anyị. Ihe onye edemede ahụ kwuru na-egosi nke a: "Ọ bụrụ na a jụghị anyị ajụjụ a, echere m na anyị ga-abụ ndị nkịtị. Ya mere, ebe a jụrụ m, nke ọma ịza azịza ya, m họọrọ ide akwụkwọ nke bụ ụdị njem dị ntakịrị aka ekpe na nke a. "
N'akwụkwọ ahụ dum, Alain Mabanckou na-ekwu banyere ahụmahụ ya n'onwe ya iji jụọ ajụjụ niile France jụrụ, njirimara, ojii, francophonie. Ọ bụghị nyocha onwe ya nke na-eme ka ọ dee ma lee ụwa anya?
N'isi nke isiokwu Olee otu onye ga - esi bụrụ onye Peshia? Mabanckou na-egosi mmechuihu ya n'ihu France nke na-abụghị nke map ahụ nke juru ya anya n'Africa. Ọ bụ ebe a ka echiche nke njirimara na-achọta azịza ya: Ịkọwa mmadụ site n'ọbara pụtara ịnweta ọhụụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-emetụta ụzọ ndụ mmadụ na-eme ka ọ dịkwuo ka evolushọn nke obodo dị ugbu a, ebe njirimara bụ si na ọdịbendị dị iche iche, p. 93.
Kedu ihe na-eche n'echiche nke gaminafricain mgbe ọ na-eche banyere nrọ ya, nke France, dịka njem njem na Mecca? Mabanckou nyefere anyị isi Ụzọ nke Europe nrọ ya dị ụtọ ma n'otu oge ahụ na-eduhie. N'ihi na otu nwa Afrika: "Ụzọ nke Europe na-eme ka ụmụaka ndị Africa na-eche na, site na njem ahụ, ọ ga-eduga na nhichapụ ebe nhụsianya ya ga-agwụ dị ka à ga-asị na ọ bụ ọnyà anwansi. ", P. 81. Mabanckou nwekwara echiche nke na "ndị Africaist" bụ ndị edemede sitere n'aka "akwụkwọ Africa" ​​ma na-ajụ itinye "Africa" ​​nke taa na nnukwu mgbanwe ha.
Kedu ihe ọ chọrọ igosipụta? Site na ahụmahụ nke ya, Alain Mabanckou wetara edemede ya ntụgharị uche miri emi banyere nsogbu ndị a na-echebara ndị ojii na ndị ọcha. Nwa sob nwa adịghị eme ka azịza banyere oji, ederede French ma ọ bụ njirimara. Ka o sina dị, ọ na-enye nkọwa dị iche iche nke nwa okorobịa nwoke dịka Mabanckou.
Ihe Nwa sob nwa Ọ na-agwakwa anyị na mmerụ ahụ dị njọ, ma ọ bụ dị nsọ ma ọ bụ na ọ bụghị, ekwesịghị ịbụ isi iyi nke okwu, ma ọ bụghị naanị njedebe nke ndụ. Ọ bụghị nlekọta nke onye edemede na-akpọ anyị òkù, ma gafere. Ozugbo a na-agafe, Mabanckou na-ekwusi ike n'eziokwu na mmadụ na-emepụta ụbọchị ọ bụla n'ememe nke ugbu a. Ihe kachasị mkpa bụ ịghọta mmadụ karịa agbụrụ ya.
N'adịghị ịjụ ebe ọdịda ala ya kwadoro, Congo bụ ebe ụdọ ụbụrụ, France nke nna nnabata, nrọ ya na America bụ akụkụ nke ọ na-eleba anya na njedebe nke njem ya, Mabanckou na-atụ aro ịpụ ajụjụ ojii ya Franco-African quagmire na ya igbochi anyị melanin, n'ihi na ọ enyekwara a n'ozuzu echiche na ndị dị iche iche onye mkpokọta njirimara, ma chepụtara echepụta na ezigbo, aghọwo ihe nke na a nkiri.
Alain Mabanckou, Nwa sob nwa, Paris, agha. Akwụkwọ French, 2012,
 Pascal Bruckner, Sob nke nwoke ọcha, Paris, Ebe Nzuzo, 2002.
Ginseng - Nanị ọgwụgwọ zuru oke nke nwere ike ịgwọ ọrịa niile
Buddha - Ntuziaka
Ighaghachite njiri mara ndi Africa n’ogbe ndi Africa